समन्वय अभावले आयोजना प्रभावित | NiD - News
समन्वय अभावले आयोजना प्रभावित
गोपीकृष्ण ढुंगाना, अन्नपुर्ण पोस्ट, २७ असोज २०७४
काठमाडौं : ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय जसरी चल्नुपर्ने हो त्यसरी नचलेपछि अरू मन्त्रालय र निकायबाट कसरी विकास सम्भव छ ? ', राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगतिबारे संसदीय समितिको बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जितेन्द्रनारायण देवले सरकारको खुलेरै आलोचना गरे, ‘पोलिटिकल, ब्युरोक्रेसी वा कानुनी के कारणले हो प्रधानमन्त्रीकै कार्यालयले आवश्यक हस्तक्षेपसम्म गर्ने हैसियत राख्दैन, न अनुगमन गर्छ न निर्देशनकारी भूमिकामै देखिन्छ । यसरी कसरी विकास सम्भव छ? '
मुलुकलाई समृद्ध बनाउने भाषण सबैतिरबाट आए पनि मुलुकले समृद्धिको बाटो पक्रन नसकेको भन्दै समितिको बिहीबारको बैठकमा मन्त्रालयगत समन्वय पनि अत्यन्तै कमजोर रहेको टिप्पणीसमेत गरे । ‘भन्नैपर्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा मन्त्रालयबीच समन्वय छैन', उनले भने, ‘यस्ता आयोजनामा एकआपसमा समन्वय र सहयोग बारम्बार जरुरत पर्छ । तर कर्मचारीको प्रवृत्तिकै कारण केही हुन सकेको छैन ।'
विकास समितिले चार वर्षे कार्यकालको अन्तिम १ सय ४० औं बैठकमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति अवस्थाको पछिल्लो जानकारी लिन बैठक डाकेको हो । समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सरोकारवाला मन्त्रालयले एउटै स्वर, लय र ताल नबनाएसम्म समयमै सम्पन्न गर्न नसकिने बताए । ‘राजनीतिक अस्थिरता भएपछि प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, सचिव र विभागका महानिर्देशक सबै पटकैपिच्छे परिवर्तन हुन्छन्, फेरिएपछि जवाफदेहिता हुन सकेन । कसलाई किन काम भएन भन्नु ? कसलाई कारबाही गर्नु ? ', अधिकारीले भने, ‘यस्ता आयोजनामा जति उपलब्धि हासिल हुनुपर्ने हो, त्यो नहुनुको प्रमुख कारण राजनीतिक हस्तक्षेप नै हो ।'
विकास समितिले चार वर्षको अवधिमा विकासका सबैजसो आयोजनालाई अड्किएका गाँठा फुकाउँदै सक्रिय बनाएर अधिकतम काम गर्ने वातावरण प्रदान गरेको उनको भनाइ छ । सांसद गणेश पहाडीले पनि राजनीतिक अस्थिरताकै कारण पूर्वाधार विकास र आयोजना समयमै सम्पन्न नभएको दाबी गरे । ‘पूर्वतयारी नगरी आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने परम्परा गलत छ, जुन तत्काल सुधार्नुपर्छ', अन्तरमन्त्रालय समन्वय बलियो नहुन्जेल विकास हुँदैन', उनले थपे, ‘पछिल्ला वर्ष जसरी विकास हुनुपर्ने हो त्यसरी नहुनुमा राजनीतक दल नै दोषी छन् ।' कतिपय आयोजना सम्पन्न भए भन्नुभन्दा सुरु नै किन भएनन् भन्नु उपयुक्त हुने सांसद गुरु बुर्लाकोटीले बताए । ‘जस्तो नेपालका राजनीतिक दल छन्, त्यस्तै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाभन्दा पुग्छ । मन्त्री भएपछि उनकै आग्रह र पूर्वाग्रहमा हुने विकासको के अपेक्षा गर्नु ? ', सांसद मोहन बाँनियाले भने । पूर्वमन्त्री शान्ता मानवीले २० वर्षअघिको मन्त्रालयको रोग आजसम्म जस्ताको तस्तै देखिरहेको बताइन् ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटाले मेलम्चीको पानी चैतभित्र काठमाडौं आउने जानकारी दिएका छन् । आयोजनाको पछिल्लो प्रगतिबारे समितिको बैठकमा जानकारी दिँदै उनले भने, ‘सुरुङ खन्न अब डेढ किलोमिटरमात्र छ । दुई ठाउँबाट खनिरहेकाले पुससम्ममा सकिएला र बाँकी समय प्लास्टर र प्रशोधन केन्द्रका काममा लाग्नेछौं ।' यसअघि यही दसैंमा घरघरमा मेलम्ची पानी आउने जानकारी गराइएको थियो ।